विद्यार्थीको कान फुटाउने शिक्षक रिहाईको माग गर्दै विद्यालय बन्द | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १६ आश्विन २०७५, मंगलवार ११:३८ लेखक नेपाली जनता
कावासोती । नवलपुरको पहाडी क्षेत्र बुलिङ्टार गाँउपालिकाको शिव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओम कुमार श्रेष्ठको रिहाईको माग गर्दै बुलिङटार क्षेत्रका सबै विद्यालयको पठन पाठन ठप्प पारिएको छ ।
विद्यालयमा ढिला आएको भन्दै कक्षा १० मा अध्ययरत विद्यार्थी खुमान सार्की नेपालीलाई कानको जाली फुट्ने गरि कुट्ने प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको रिहाईको माग गर्दै नेपाल शिक्षक संघ बुलिङटारले मंगलबारदेखि विद्यालयको पठन पाठन ठप्प पारेको हो ।
नेपाल शिक्षक संघले मंगलबारदेखि १८ गते सम्म विद्यालयको पठन पाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय जाने विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । गत असोज २ गते कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी खुमानलाई ढिला आएको भन्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले कानको जाली फुटाइदिएका थिए ।
पीडित खुमानका बुवा वीरबहादुर सार्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा असोज ५ गते किटानी जाहेरी दिएपछि आरोपित प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई प्रहरीले असोज ११ गते पक्राउ गरि म्याद थप गरेको छ । नवलपुर प्रहरीले पीडितको उजुरीका आधारमा असोज ११ गते श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेको हो ।
अदालतबाट ८ दिनको म्याद थप गराएर श्रेष्ठमाथी कुटपिट एवं अंगभंग गर्ने महलमा मुद्दा चलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव निरीक्षक टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
घाईते खुमानको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । भरतपुर अस्पतालका नाक, कान घाँटी रोग विज्ञषेश डा. रमेश भण्डारीका अनुसार प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट खुमानको कानको जालीमा क्षति पुगेको छ । उनको सुन्ने क्षमतामा समेत कमी आएको डा. भण्डारीको भनाइ छ ।
घरबाट झण्डै डेढ घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्ने गरेका खुमानसहितका १० विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले १५ मिनेट ढिला आएको भन्दै लाइन लगाएर कुटेका थिए । यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघ नवलपुरले प्रद्यानाध्यापक श्रेठलाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाउदै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
किरण चेम्जोङ बने माल्दिभ्समा उत्कृष्ट गोलकिपर
काठमाडौं । नेपालका गोलकिपर किरणकुमार चेम्जोङले यस वर्षको ‘माल्दिभ्स फुटबल अवार्ड’ जितेका छन् । टिम नेपालको पहिलो रोजाइका गोलकिपर…
शिक्षण अस्पतालमा मोटरसाइकल चोर्ने गिरोह सक्रिय
काठमाडौं । महारागजञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालबाट मोटरसाइकल दैनिक चोरी हुन थालेको छ। मोटरसाइकल…
पुर्ब जानकारी बिनै पोखरा-बागलुङ्ग लोकमार्ग दैनिक छ घण्टा बन्द
पर्वत । लामो समयदेखि जीण रहेको पोखरा–बागलुङ लोकमार्गलाई फराकिलो बनाउने र सुधार गर्ने क्रममा दैनिक साढे छ घण्टा बन्द गर्न थालिएको…
काठमाडाैँ । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने पितृ पक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध आजदेखि सुरु भएको छ ।
जिवित दम्पत्तीलाई मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र
दैलेख । भगवतीमाई गाउँपालिकाले जिवित व्यक्तिलाई मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ । जीवितै रहेका भगवतीमाई गाउँपालिका–४ मनिराम खत्री र उनकी…